Sony G3221 nwere igwefoto 23MP na 16MP na -aga na AnTuTu | Androidsis
Sony egosila ọzọ na mgbe ọ na -abịa imelite ọdụ ụgbọ elu ya, ọ bụ n'etiti ndị kacha mma. Ọ bụkwa n'ụbọchị ndị a ka anyị ghọtara na ọ dị mkpa ịnweta ekwentị emelitere n'oge ahụ, ebe ọ bụ na ndị na -enweghị nke a, ha na -ahụ ha na ha chọrọ ha inwe omume ọma na uru nke Nougat; mmelite nke nwere ihe karịrị anya ya.
Otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ndị ị nwere ike mata nke ahụ ị ga -enwe mmelite afọ abụọ ngwa ngwa, bụ G3221 dị nso. Ngwa a ga -enwe mgbawa Helio P20 yana site na ihe enwere ike ịhụ na nseta ihuenyo na AnTuTu, ọ na -enye ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ na -atọ ụtọ nke ukwuu maka ihe ga -anọchi Xperia M5.
Ọ bụ awa ole na ole gara aga ka ewepụrụ ihe onyonyo mbụ nke onye ga -anọchi Xperia XA, yabụ n'etiti mmelite na Daysbọchị ndị a nougat na usoro Z5 na ntapu nke taa, anyị nwere a ezigbo oge maka ụlọ ọrụ Japanese na nkewa mkpanaka ya.
Site na Sony G3221, ewezuga ịmara na o nwere mgbawa Helio P20, anyị ma na ọ ga -enwe 4GB nke Ram na ebe nchekwa dị n'ime 64GB. Ọ ga -arụ ọrụ ekele gam akporo 7.0 Nougat na mwepụta ya, ọ ga -enwekwa akụkụ foto na igwefoto isi 23 MP yana 16 MP ọzọ maka selfies. Na mkpebi ihuenyo ọ na -anọ na HD zuru ezu ma ọ bụ 1080p.
Xperia M5, nke ewepụtara na etiti afọ 2015 nwere ụdịrị nkọwa ahụ, n'agbanyeghị mgbawa ahụ bụ Helio X10, yabụ, ihe niile yiri ka anyị na -eche onye ga -anọchi ya anya maka afọ 2017. Ọnụ ụgbọ ala ọzọ na -atọ ụtọ nke na -egosi site n'aka onye nrụpụta Korea na nke ahụ ga -eme ngosi ya n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ n'afọ a nke ka malitere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony G3221 gafere AnTuTu na igwefoto 23MP na 16MP